Dharka 90-ka - Dharka Ragga ee Qaabka | Ragga Stylish
Tobankii sano ee 90-meeyadii waxay ahaayeen kuwa kale oo dejiya isbeddellada. Qaabkiisa ayaa u muuqday mid dabacsan, caasinimo laakiin sidoo kale aad u yar. Waxay ahaayeen dhowr sano oo aynaan ilaawayn doonin soo ifbixinta ifafaalaha murugada, oo leh dharka kabaha ugu horreeya iyo qaabka nus-hippie-ka.
Kooxaha Rock iyo rap ayaa sidoo kale ku dhuftay qaababkooda iyo taxanaha telefishanka sida Dareenka Nolosha, Saaxiibbada ama Amiirka Bel-Air ayaa calaamadeeyay moodada oo lagu soo bandhigay dharka magaalooyinka. Maxaa si weyn u istaagay tobankan sano? Xaqiiqdii ma ilaawi doonno shaatiyada calanka, jaakadaha wax qarxiya ama markii aan tusnay xuddunta.
Miyaynu mar kale arki doonnaa qaabkiisa? Xaqiiqdii haa, isbeddellada ayaa soo noqnoqonaya isla naqshadeeyayaashuna waxay dhiirrigelinayaan qaar ka mid ah hal-abuurkooda iyagoo wata moodooyin yaryar oo calaamadeeyay doorbid tobanaan sano. Sababtoo ah iyagu way jeclaayeen iyaga iyo haddii mar kale dib loo abuuro, waa sababta oo ah waxay sii wadaan jeclaantooda oo waligood waxay la jiri doonaan dib-u-habeyn cusub oo hadda jirta.
1 Dharkii lixdamaadkii
1.1.1 Shaatiyada caatada ah
1.1.2 Funaanado la daabacay
1.1.3 Burburiyaha Dabaysha
1.1.4 Jaakadaha xidhan iyo dusha sare
1.1.5 Jaakadaha duqeynta
1.1.6 Jaakadaha maqaarka oo leh zip
1.4.1 xirmooyinka fanny
1.4.2 Boorsooyin ama boorsooyin leh silsilado
1.4.3 Bandanas ama xargaha madaxa
Shaatiyada caatada ah
Shaati noocan ah Waxay ahaayeen kuwo ballaadhan, boorsooyin leh oo qaab rasmi ah u ahaa grunge waqtigaas. Fannaanka Nirvana ayaa u muuqday mid dhiirrigelin u ah noocyadan shaatiyada oo ay noqdeen kuwo ay xirtaan dumarka.
Sidee loo xirtay funaanadahaan? Qaar waxay sharad ku xidheen inay ku xidhaan dhexda. Waxaa lagu darsaday joonisyo jeexjeexan, badanaa la xidho oo haddii ay furan yihiin lagu kabi lahaa funaanad cad oo ka hooseysa.
Funaanado la daabacay
Dhallinyaradu waxay jeclaayeen xirashada dusha sare ee qolalka leh, oo leh surwaal jiinis jeexjeexan oo sarreeya ama surwaal bermuda ah. Cufka ay ka kooban yihiin, madow ama caddaan, ayaa lagu shaabadeeyey sawirrada kuwayaga kooxaha dhagaxa jecel, las wajiyada wareega ee aashitada caanka ah ama funaanadaha ay wataan astaamo caan ah oo caan ah.
Yaan xusuusan jaakadahan dabaysha jebiya? Iyada oo ay dhar nylon iyo midabo dhalaalaya in ay isku darsadeen iyagoon lahayn nooc xeer ah. Waxay qorsheeyeen qaab isboorti dib-u-dhac ah inta badanna waxaa lagu dari karaa surwaal isboorti oo isku dhar ah iyo midab isku mid ah.
Jaakadaha xidhan iyo dusha sare
Shaatiyada cad ee haweenka ayaa la gashaday mana furfurneyn, laakiin dhexda ku xidhan. Waxay ahayd mid aad moodada in la muujiyo xuddunta waana sababtaas sababta loo iibiyay dushooda gaagaaban oo loo arkay iyagoo dhexda uga tagaya hawada furan.
Waxay ahaayeen kuwo soo noqnoqda si ay u arkaan iyaga oo ka samaysan harag iyo waliba dhar ka samaysan. Waxay ahaayeen ku dhowaad kaamil ah oo qof kastaaba wuxuu lahaa mid, tan iyo markii ay ku habboon yihiin ku dhowaad dhammaystir kasta.
Jaakadaha maqaarka oo leh zip
Shaki la'aan waxaa loo abuuray rookayaasha, si ay hawada u go'doomiyaan oo ay u difaacaan. Laakiin naqshadooda waxay bilaabeen in la siiyo nolol iyaga u gaar ah iyo jaakadaha maqaarka oo leh jiinyeer, oo leh rivet, silsilado, iyo sawirrada qaar sida dhakada oo kale dhabarkiisa
Jeanska dhexda dheer iyo suumanka ballaaran ayaa la gashaday Waxay sidoo kale ku soo duuleen moodada 90-meeyadii. Waxaa jiray dad badan oo caan ah oo lagu sawiray surwaal nooca Hooyada ah, waa buluug iyadoo aan la dhagxin ama aan midab beddelmin, aad iyo aad u dabacsan qayb ka mid ah jiinyeer, qalooca iyo lugta.
Haddii aan haysanno wax aan iftiiminno, waa taas Waxay u xirnaayeen si dabacsan, iyagoo leh raaxo weyn, iyo muuqaal dillaacsan oo duugoobay. Qaybta denim sidoo kale waxaa lagu arki karaa jaakadaha ay ku xardhan yihiin xargo badan iyo balastarro.
Dharka guud ee Denim sidoo kale waxay ahaayeen moodo, inbadan oo iyaga kamid ah ayaa la arkay iyadoo mid kamid ah shaqaalayaashoodii loo tuuray dhinaca. Waxaan ku xasuusan karnaa Will Smith taxanaha Amiirka Bel Air.
Kabaha Platform-ka ayaa durbaba bilaabay inay dejiyaan isbeddel, iyo wax taas ma iloobi karno waa caanka Dr. Martens kabaha . Waxay ahaayeen astaan ​​fallaagow iyo calaamadda aqoonsiga muuqaalka u eg punk-u. Kuwa caanka ah ee saameynta ugu badan ku yeeshay moodelkeeda waxay ahaayeen Wynona Ryder iyo Gwen Stefani.
Waxay yihiin aaladda ama boorsada ku xidhan dhexda, waxaa loo xirxiray qalab kasta oo sidoo kale waa la gashan karaa garabka. Maanta waxay ku noqotay dukaankeenii oo noocyo badan iyo xayeysiisyo badan ayaa ku sharadoodaya.
Boorsooyin ama boorsooyin leh silsilado
Xaqiiqdii waad xasuusataa boorsooyinka caanka ah ee lagu dhejiyay jeebka dambe ee surwaalka iyo silsilad soo ifbaxaysa oo ku dheggan mid ka mid ah suumanka suunka ee surwaalka
Bandanas ama xargaha madaxa
Garbasaaruhu sidoo kale waxay ahaayeen qalab muhiim ah. Waa la gashan karaa iyadoo duuban oo foolka daboolaya ama furan oo qoorta kaga xidhan siinta foomka burcad-badeedda. Fannaanka Aaliyah ayaa durba xaaqay qaabkan oo xirtay xilli kasta isagoo abuuraya isbeddel.
Qalabka nalalka ayaa sidoo kale noqday moodada. Waxay ku calaamadeeyeen waqtigoodii fiicnaa wejiga guga-xagaaga moodooyinka qaarna aad ayey u qurxeen inay xirtaan. Ma jirin faahfaahin buuxda xitaa qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » 90s dharka
Timo jarista ragga bidaarta leh